Baydhabo Online | The best web site Music Online - News: Cabdikariin Xuseen Guuleed' Degdeg baan wax uga qaban doonaa Howlgalada Alshabaab ee weerarada Dhabo galka ah.
Cabdikariin Xuseen Guuleed' Degdeg baan wax uga qaban doonaa Howlgalada Alshabaab ee weerarada Dhabo galka ah.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga qaranka cabdikariin Xuseen Guuleed oo 2 jeer dhawaan loo galay isaga iyow afdi la socda deeganaka Buufoow ee u dhow Degmada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose aaya sheegay inay wax ka qaban doonaan weerada Dhabogalka ah ee Alshabaab ay la beegsaneyso Kolonyada wada madaxada iyo Saraaakiisha Dowlada.
waxa uu sheegay wasiirku inay soo afjarayaan Arintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana aysan nat5iijo u keeni doonin Alshabaab weerarada gaadmada ah ee ay la beegsanayaan Dowlada Iyo Amisoim Maadam looga awoodf roonaaday dagaalkii Foolka Foolka ahaa.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu sheegay in wasaaradiisu wqax ka qaban doonto howlaha adkeynta Amaanka Tafatiraha on December 05 2012
0 Comments · 248 Reads
2,411,682 unique visits Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones.